Xaaladda Wadashaqeynta Internetka | Martech Zone
Arbacada, Oktoobar 31, 2012 Douglas Karr
Adduunku wuu is beddelayaa. Suuqa adduunka, ka baxsan, shaqaalaha fog fog of arrimahan soo kordhaya oo dhami waxay ku dhacayaan goobta shaqada waxayna u baahan yihiin qalabyada la socda. Wakaaladayada gudaheeda, waxaan u adeegsanaa Mindjet (macmiilkeena) maskaxda ku haynta iyo socodka socodka, Yammer wadahadal, iyo Basecamp maaddaama bakhaarkeenna shaqada ee internetka ku yaal.
Laga soo bilaabo Clinked's Infographic, Xaaladda Wadashaqeynta Internetka:
Khibradayada, iyo tan kuwa nala tartamaya, gabi ahaanba waa shaki la'aan: 97% ganacsiyada isticmaalaya barnaamijyada iskaashiga ayaa soo sheegay inay awood u leeyihiin inay u adeegaan macaamiil badan si hufan. Laakiin faa'iidooyinka ugu badan waa kuwa gudaha ah: isku xirka bulshada ee ganacsiga ayaa la muujiyey inay yareyneyso mugga emailka 30% isla markaana kordhinayso waxtarka kooxda 15-20%. Cilmi-baaristu sidoo kale waxay muujineysaa in kooxuhu ay qoraan dukumiintiyo 33% ka dhakhso badan iyadoo la adeegsanayo aaladda maareynta dukumintiyada la wadaago.
Fikradayda, tan ugu muhiimsan ee laga qaado tan waa tan ku guuldaraystay hirgelinta tikniyoolajiyadda bulshada ka dhigaysa shaqaale xirfad sare leh iyo maarayn 20-25% wax soo saar yar!
Tags: BasecampiskaashiMindjetshaqaalaha wareegaiskaashiga internetkaiskaashiga bulshadanetwork bulshadaxiriirka bulshadagobolka iskaashiga internetkaiskaashiga kooxdaisbedel